Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa ambaatii gadi dhiifaman - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Lammiileen Itoophiyaa Keenyaatti hidhaman akka gadi dhiifaman walii galameera
Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr Abiyyi Ahmed daawwannaa biyyoota ollaa kanneen akka Jibuutii,sudaanii fi keenyaatti taasisaniin dhimmoota hariiroo dippiloomaasii biyyoota kanneenii waliin cimsan akkasumas walii galteewwan garagraa gama hawaasummaa, diibagdee fi siyaasaan mallatteessaniiru.
Ministirri Muuummee Dr Abiy Ahmed wayita sudaanii fi Keenyaa daawwatan marii qondaaltota biyyoota kanneenii waliin erga taasisanii booda lammiilee itoophiyaa sababa garagaraan achitti hidhamanii turan akka gadi lakkifaman murtaa'eera.
Namoonni mana hidhaa sudaanii gadi lakkifaman gidiraa yeroo dheeraa booda murtee ministira muuummee haaraatiin bilisa ba'uutti gammadaniiru.
Namoota kunneen keessaa tokko kan taate Shamarree Kadiijaa Abbaa Jabal Godina jimmaarraa hojiif gara sudaan deemtee akka carraan hidhamuu ishee mudateen khanga hiikamtutti rakkoo ishee mudate haala kanaan ibsiteetti.
'Du'aaf jireenya keessa turre'
''Hojjenneedhuma of jijjrree biyyatti galla jennee manaa baane yeroo baanu.Mana hidhaa keessatti immoo du'aaf jireenya keessa turre. Haalli mootummaa biyya keenyaa jijjiirame haa gadhiifaman gaafa jedhamuu sobuma nattii fakkatee ture.'' jetti Kadijjaan.
Haala kamiin akka hidhamtee fi rakkoowagootaaf dabarsite akkanaan dubbatti Kadijjaan.
''Ergan asitti qabamee waggaa tokko. Ramadaanni guyyaa 15 yeroo hafun as gale.Du'aafi jireenya keessa turre, maatiin koo akkan du'eefi jiru illee hin beekan ture erga gadhiifame guyyaa lama ta'eera.''jechuun Jimaata darbe yaada nuuf laatteetti Kadijjaan.
''Waan hundumaa waraqaadhaan na gaafatani malee waanti biraa isaan na gaafatan hin jiru.Eessa akkan jiru iyyuu ergan baheen arge malee iddoon jiruyyuu hin beekun ture.
Ergan as dhufee waggaa sadii dha.waggaa tokko mana hidhaan ture'' jetti.
Kadiijaan erga hidhamtee bakka jirtu otoo hin ba'in ammallee harka namaa jiraachuu dubbatti, namoonni biroon seenaasheen walfakkaatu qabanis hedduudha jetti.
Goodayyaa suuraa Lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Sudaanii gadi dhiifaman, Hojjettoota Imbaasii Itoophiyaa Sudaan jiran waliin
Walii galtee biyyoonni lameen irra ga'aniin walumaa galatti sirreeffamtoonni 1400 Sudaanirraa 1600 ammoo Keenyaarraa gadi dhiifamuu miidiyaan biyya keessaa gabaasaniiru.
Image copyright Addisu Arega/FB
Goodayyaa suuraa Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaatii gadi dhiifaman gammachuu ibsatan
Haaluma walfakkaatuun sababa garagaraatiin kanneen mana hidhaa keenyaa turanis walii galtee biyyoota lamaaniin akka hiikaman murtaa'eera, murtee kanarra kan ga'ame daawwannaa Ministira Muummee Itoophiyaa Dr.Abiy Ahmedirratti walii galtee irra ga'ameen jedhu Keenyaatti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii.
''Ministirri Muummee Itoophiyaa wayita Keenyaa daawwatan lammiileen Itoophiyaa as jiran akka hiikaman mootummaa Keenyaa wajjin walii galaniiru. Nutis hidhamtoota Itoophiyaa as jiran hunda biyyatti erguuf qophii xumurree jirra. Namoonni 69 kanneen duraan mootummaa Keenyaa waliin mariyannee gadi dhiifamanis ni jiru, isaaniiniss amma biyyatti deebisna '' jedhan Ambaasaaddar Diinaan.
Poolisoota keenyaa fi qaamota dhimmi ilaallatu waliin dubbannee akka gara biyyaa deebi'aniif hojjechaa jiraachuus dubbataniiru.
''Haga ammaa qulqulleessaa jiru. Kaawuntii 47 Keenyaan qabdu keessatti lammiileen keenya hidhamanii jiru. Isaan kanneen adda baasa jira Poolisiin Keenyaa fi Bulchiinsi Mana Hidhaa Keenyaa. Akka dhimmi isaanii qulqullaa'een gara biyyaa deebisna. Fedhiisaaniitiini kan deebi'ani. Mootummaanis lammiilee hiikamaniif waan barbaachisu ni godhaaf. Namoonni kunneen hojii irraa qabamanitti akka deebi'an ni hojjetama'' jechuun dubbatan.